Fahaizana fiteny maro ety anaty aterineto sy fifanakalozana asa fandikàna · Global Voices teny Malagasy
Fahaizana fiteny maro ety anaty aterineto sy fifanakalozana asa fandikàna
Katsahana ny hiasa hisiana rafitra ho "fitadidiana asa fandikàna"
Voadika ny 14 Septambra 2020 3:22 GMT
[Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny May 2009, mankany amina lahatsoratra anglisy avokoa ny rohy rehetra)
Global Voices dia nahazo famatsiambola avy amin'ny Ford Foundation ho fanohanana ny asa iarahanay amin'ny Lingua, ilay tetikasa fandikàna ireo lahatsoratry ny Global Voices, sy hananganana tetikasa iray hanadihadiana ny fomba hahafahanay manefy endrika sy manohana vondrompiarahamonina iray mifanakalo fandikàna ety anaty tambajotra.
Efa an-taona maro lasa izay no nanombohana niresahana ny fiantraikan'ny aterineto iray mahay fiteny maro, fony nanomboka nanao ny asa fandikàna ny tranonkalan'ny Global Voices ho amin'ny fiteny ‘Mandarin’ ireo mpandika. Nihaona nandritra ny donakafo tao Delhi ireo mpandika marobe avy amina vondrompiarahamonin'ireo fiteny hafa mba hanangana ny tetikasa Lingua, tamin'ny 2006. Amin'izao fotoana izao ny Lingua dia mandika votoaty avy ao amin'ny Global Voices ho amina fiteny 15 (fanamarihana: taona 2009), ary misy fiteny dimy hafa eo an-dàlam-panandramana. Mba hahazoana fanampim-panazavana misimisy kokoa momba ny tetikasa Lingua, afaka atao ny mijery ny fifanesen'ny raharaha, napetraky ny tale mpiara-mitantana Leonard Chien, sy ireo diaporama ary lahatsoratra manankarena avy amin'i Chris Salzberg.
Azo atao ny mijery ity sarintany misy ireo mpandika ato amin'ny Lingua ity amin'ny endriny lehibe kokoa.
Ny tetikasa Lingua, azo lazaina ho nipoitra manontolo avy amin'ny firehetampo, ny fahaizamamorona ary ny ezak'ireo mpandika mpirotsaka an-tsitrapo, dia mampiseho ny fahafahan'ny vondrona iray misy ireo mpandika sy mpanoratra, mitovy fihevitra sy fijery mba handingana ny sakan'ny teny ka mizara ny tantara sy vaovaon-dry zareo, mifototra amina sehatra iray tsotra sy tsy sarotra takarina. Tsipihan'ny Lingua ny lanjan'ny asan'ny olombelona, ny maha-zavadehibe ny kolontsaina sy ny vondrona amin'ny fisafidianana ireo lohahevitra ho adika. Voaporofon'izany ihany koa ny lanjan'ny fandikàna ataon'olombelona, ifampizaràna ary miparitaka tsara, ho toy ny fitaovana iray fandikàna malaky ireo antontam-baovao maro mifanaraka amin'ny toetrandro.
Ho setrin'ny fanamby iray mbola goavana kokoa mba hanànana aterineto mahay fiteny maro no nipoiran'ny hevitra fifanakalozana fandikàna ho toy ny tetikasa iray miara-dàlana sy mifameno amin'ny Lingua. Satria ny tsirairay amintsika, miaraka amin'ireo mpisera aterineto maherin'ny 1,3 lavitrisa, dia tsy miditra akory afa-tsy amina ampahany kely sy bitika amin'ireo votoaty ety anatin'ilay Tranonkala, arakaraky ny fahaizantsika ny fiteny. Io olana io no natrehantsika nandritra ny Donakafo 2008 natao tany Budapest, sady nisy diaporama iray an'ny tarika Lingua, ary tamina fifampiresahana. Mazava tsara ny tatitr'i Ethan Zuckerman momba io resaka io ao anatin'ity lahatsoratra ity, nadika amin'ny fiteny maro avy amin'ity lahatsoratra amin'ny teny anglisy ity.
Ankehitriny isika dia manana fomba fijery teorika momba ny mety ho fiasan'ny asa fifanakalozana fandikàna, sy ny fampifanarahana azy amin'ilay vondrompiarahamanina efa misy, malalaka ary feno famoronana, izay tsy iza fa ny Lingua. Ny asa voalohany dia ny fametrahana fanontaniana marobe, mahaliana sy manindrontsindrona, momba ireo vondrona sy kolontsaina ananan'ireo mpandika, momba ny endrika ara-toekarenan'ny vokatra nozaraina, ary raha toa ny natioran'ilay fangatahana momba ireo torohay voadika avy amina loharano maro isankarazany, avy eo ny fijerena raha toa isika ka ho afaka hisintona zava-mahaliana avy amin'ireo valinteny azontsika. Ny tanjontsika dia hoe hiasa isika, indrindra indrindra amin'ny famoronana vondrona, fa tsy hoe hamorona fitaovana.
Katsahanay ny hiasa hisiana rafitra ety anaty aterineto ho “fitadidiana asa fandikàna”, tsotra sy andraisana anjara, izay hahafahana mitahiry ireo asa fandikàna fehezanteny mifampidipiditra ary mametraka vokabolary iray voadika iombonana. Misy ireo fitaovana tsara entina hanamoràna ny asa fandikàna, toy ny World Wide Lexicon sy ny dotSub, ho apetraka ihany koa ny fanontaniana momba izay fomba hampidirana ireo fitaovana ho any anatin'ireo vondrompiarahamonina mpanao fampiharana.
Tianay ihany koa ny handinika raha toa ny sehatra iray fifanakalozana ka ho afaka hitondra fifandraisana mora kokoa eo amin'ireo tantara tsara indrindra avy amin'ireo gazetin'olontsotra sy ny media izay mety hangataka asa fandikàna lohahevitra iray manokana. Ohatra, azo atao ny hoe ireo namantsika ao amin'ny New America Media mety hahita fa ilainy ny fifanakalozana mba hamatsiana votoaty, avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, ary amin'ny fiteny sahaza, ho an'ireo asa famoahana gazety miisa 2000 amin'ny fitenim-poko miaraka miasa amin-dry zareo.
Mazava loatra fa misy toerana ho an'ireo tetikasa izay miasa eo anatin'ny hantsana manasaraka ireo mpanome votoatim-baovao amin'ny fiteny isankarazany, sy ny fahafahana azon'ny fifanakalozana asa fandikàna entina manampy amin'ny fanokafana votoaty marobe izay tsy afaka nidirana tany aloha noho ny sakan'ny fiteny, ary ny tsy fahafahana mahazo fandikàna tsy lafo nefa tsara kalitao. Tafiditra anatin'izany ireo mpamatsy vaovao mitady fomba hafa hahazoana ireo vaovao avy amin'ny fiteny hafa, sy ireo fikambanana mila toky fa ho azo rasina amin'ny fiteny isankarazany ireo vaovao miresaka ny olana sahanin-dry zareo, ary angamba ireo hafa mpampiasa marobe izy tsy nosainintsika satria tsy misy sehatra tahaka izany aloha amin'izao fotoana izao.
Mbola ety am-panombohana ny tetikasa isika. Vao avy nandefa filazana fandraisana ho tomponandraikitry ny tetikasa: mety ho liana ny sasantsasany amin'ireo mpamaky antsika ka handefa ny fisoratany anarana. Ny tanjontsika dia ny hanangana vondrompiarahamonina iray manana fahalinana manodidina io tetikasa io, satria toy ireo tetikasa rehetra ato amin'ny Global Voices, fantatsika tsara fa ny hevitra tsara indrindra dia matetika azo avy amin'ireo traikefa sy fiarahana miasa. (Ny sasany amintsika dia nifanatri-tava nandritra ny Open Translation Tools 2009, any Amsterdam, mba hanomboka ny fifampiresahana). Angonintsika ihany koa ireo hevitra fiaingàna, ary asaintsika daholo ireo olona mba haneho ny heviny, ao amin'ny wiki an'ny Global Voices. Afaka mandray anjara ao daholo ny rehetra !
23 ora izayOseania